Izingxenye zensimbi ezishibhile ezipholisha ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Izinto ezijwayelekile zokucutshungulwa kwensimbi yilezi: insimbi ehlanganisiwe, insimbi engagqwali, i-tinplate, insimbi yasentwasahlobo, ithusi nethusi, ingxubevange ye-magnesium, i-aluminium ingxubevange ebandayo, ipuleti elishisayo, ipuleti lashukumisa, ipuleti kagesi, i-aluminium ipuleti, insimbi engagqwali, ipuleti lethusi. Okuvame ukusetshenziswa ukufakela ugesi nokushisela igesi, kanye ne-laser welding, i-brazing, i-welding ye-thermal, i-electron beam welding, i-welding eqhumayo, njll.
Ishidi lensimbi lokucwebezelisa nokugaya inqubo-inkambiso ngokunemba kwensimbi yezingxenye zensimbi
1. Ukupholisha ukugcoba ubuso bento eboshwe noma ifilimu yokumboza ngemidiya yezingxabano efana ne-sandpaper, i-pumice, i-powder enhle yamatshe, njll.
2. Ukupholisha kuyindlela yokucubungula esebenzisa umthelela womshini, wamakhemikhali noma we-electrochemical ukunciphisa ukuqina kobuso bendawo yokusebenza ukuthola indawo ekhanyayo nebushelelezi.
Indima yensimbi yokupholisha yensimbi nezingxenye zokugaya
- Isikhunta wokucwebezelisa okokuqala ukukhulisa bafake ukumelana nokugqwala ukumelana ebusweni isikhunta, futhi ukunweba ukuphila inkonzo isikhunta.
- Isikhunta wokucwebezelisa kungathuthukisa ukunemba ebusweni isikhunta, ukuvimbela isizukulwane burrs, futhi sinciphise okuvela imikhiqizo onesici.
- Okwesikhunta, ukupholisha kunganciphisa ukumelana ne-resin futhi kwenze imikhiqizo yepulasitiki ibe lula ukunamathela. Nciphisa umjikelezo wokukhiqiza, uthuthukise ukusebenza kahle kokusebenza, futhi ugcine izindleko zamabhizinisi.
- Emkhakheni we-optical, isikhunta sokupholisha singahlangabezana nezidingo zamakhono we-optical kanye ne-aesthetics yomsebenzi wokusebenza ngezinga elikhulu kakhulu.
Izinzuzo zensimbi yokupholisa insimbi ka-Ouzhan
- Zonke izinqubo zokupholisa izinsimbi ezinemba kanye nezinqubo zokugaya zingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokupholisha okuqondile kwensimbi nokucubungula.
Langaphambilini OEM ishidi laser ukusika izingxenye
Olandelayo: Izingxenye zensimbi zensimbi ezipholisha izingxenye
Black anodized 6061-T6 aluminium ingxubevange CNC machi ...